Bhanga guru renyika reRBZ rakazivisa neMuvhuro kuti kutanga musi wa11 Mbudzi munyika munenge mave neimwe mari inenge ichishandiswa pamwe chete nemari iripo kare.
Mumashoko kuvatori venhau, bhanga reRBZ rakazivisa kuti kunenge kwave nemari yendarama yemadhora maviri inenge ichishanda neiripo kare yebepa ye2 dollar bond note svondo rinouya nemusi weMuvhuro.
Bhanga iri rinotiwo kuchauya imwe mari yemadhora mashanu inenge ichingoshandiswawo neiripo ikozvino. Gavhuna weRBZ VaJohn Mangudya vainge vazivisa kare nezvekuuya kwemari iyi svondo rapera.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dziri kuyambira kuti kuda kushandisa dhora remuZimbabwe pari zvino kupedzera hoko padehwe retsindi nekuti ratotanga kushaya simba uye vamwe vachiramba kuri tambira.
Asi vaimbove gurukota rinoona nezvemari vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC VaTendai Biti vanoti mari idzi hadzishande zvachose. VaBiti vanoti zviri nani kuti vanhu vashandise havo dhora rekuAmerica nekuti vanhu havana chivimbo nemari yemuZimbabwe iyi.
Asi Nhengo yeZanu-PF vari muzvinabhizimisi VaGilbert Muponda vanoti havanone chakaipa kuti vanhu vawane mari yekushandisa.
Mamwe makambani munyika anonzi ari kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica kunyangwe hazvo mutemo weStatutory Instrument 212 of 2019 usingavape mvumo sezvinoitwa kumakambani akaita seAir Zimbabwe anogona kutengesera vekunze matikiti endege nemari dzekunze.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers VaDenford Mutashu vatenda kuti vamwe vanamuzvinabhizimisi vari kubhadharisa vanhu nemari dzekunze. Mashoko aya atsinhirwawo nameya weguta reHarare VaHerbert Gomba vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo yave kudawo kubvumidzwa kuti ibhadharise vanhu nemari yekunze.
Vatiwo vanoda kuti makambani anobhadharisa mari dzekunze kune zvavanotengesa vabhadharewo mitero nemari yekunze. Vati vari kuisa chikumbiro kubva kugurukota rezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube uye gurukota rezvematunhu VaJuly Moyo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna VaNcube naVaMoyo. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema zvikuru nekuhura kwezvinhu vachiti kunyangwe hurumende iri kuti vabhadhare nemari yemunyika, vemabhzimisi vari kuvabhadharisa vachishandisa chikero chemari yekunze.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vagara vachiyambira vari kudhurisa zvinhu asi zvinenge zviri kukona n’anga murapwa achida.